सित्तैमा सल्लाह दिने? आफैलाई भारी पर्ला नि!
आयोमेल संवाददाता काठमाडाैं - सोमबार, साउन १२, २०७७
हालसालै आफ्नो कार्यालयमा तपाईँले कुनै चुनौतीपूर्ण कामबारे छलफल गरिहरँदा कुनै सहकर्मी तपाईंसमक्ष निःशुल्क सल्लाह दिँदै प्रकट हुनुभएको घटना सम्झनुहुन्छ?
यदि सम्झनुहुन्छ भने के तपाईँले सो सहकर्मीको सल्लाह ग्रहण गर्नुभयो? सायद गर्नुभएन !
हुनसक्छ तपाईँले सहकर्मीको उक्त सल्लाहलाई मनमनै अवैध मान्नुभयो र सोच्नुभयो, ‘तपाईँलाई के थाहा यो कस्तो खालको समस्या हो र मैले के–के उल्झन झेलिरहेको छु भनेर?’ अझ आक्रामक भएर तपाईँले यस्तो पनि सोच्नुभयो होला, ‘तपाईँले मलाई कत्ति नै पो चिन्नु भएको छ र ? मेरो समस्यामा सुझाव दिइ टोपल्नुहुन्छ?’
‘कोचिङ एक्सपर्ट’ एवं लेखक माइकेल बुन्गे स्टेनियर सल्लाह–सुझाव दिने प्रवृत्तिले कार्यथलोमा नयाँ महामारीको रुप लिएको दाबी गर्छन्। यसै दाबीलाई व्याख्या गर्दै उनले ‘द एड्भाइस ट्र्याप’ पुस्तक लेखेका छन्। जसमा उनले अन्यलाई सुझाव दिने हाम्रो स्वभाव ‘सफल मानिससँग सबै प्रश्नको जवाफ हुन्छ’ भनेर समाजले दिएको मान्यताको जगमा निर्मित हुने तर्क गरेका छन्।
यसैगरी कार्यथलोमा नेतृत्वकर्ताहरूले अन्यमाथि आºनो सुझाव स्वच्छन्दतापूर्वक थोपरेर आफ्नो हैसियत पुष्टि गर्न खोज्ने गरेको पनि उनी बताउ“छन्।
त्यसो त अन्यलाई सहयोग पुगोस् भन्ने सकारात्मक अभिप्रायका साथ सुझाव दिइने गरेता पनि यसरी सुझाव दिइरहँदा हामीले आफूभित्रको ‘सुझाव दानव’लाई उन्मुक्त गराइरहेको हुने अर्का ‘प्रोफेस्नल कोच’ बन्गे स्टानियर बताउँछन्। ’तर, यस्तो बानीलाई रोक्न जरुरी छ किनकी हतारमा जान्ने–सुन्ने बन्न खोज्दा हामीले गलत सुझाव दिइरहेको पनि हुनसक्छांै वा हामीले दिएको सुझाव सही भए पनि सुझाव दिइएको मानिसस“ग सम्बन्ध नयाँ भएको कारणले उनले उक्त सुझावलाई ग्रहण नगर्न पनि सक्छन्,’ उनी थप्पछन्।
स्टानियरकाअनुसार हामीभित्रको ज्ञान सम्बन्धी पूर्वाग्रहले हामीलाई ‘आफूले दिएको सल्लाह अन्यको भन्दा राम्रो छ’ भनेर विश्वास गर्न ऊर्जा दिन्छ। मानिसमा कायम यस ज्ञान सम्बन्धी पूर्वाग्रहका कारण हामी आफूलाई अन्यभन्दा बढी सीपयुक्त र क्षमतावान भएको सोँच्ने गर्छौं।
उदाहरणको लागि यसै ज्ञान सम्बन्धी पूर्वाग्रहमध्येको एक ‘डनिङ–क्रुगर इफेक्ट’ले मानिसलाई उसको अज्ञानताबारे अज्ञान बनाउ“छ। त्यो कसरी भने कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित सतही ज्ञान वा गलत मान्यताको बाबजुत पनि हामी आफूलाई विभिन्न विषयमा सरसल्लाह प्रदान गर्न योग्य सम्झन्छौं।
‘जति निर्धक्क भएर सुझाव दिइन्छ, सो सुझाव त्यति नै गलत हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ,’ स्टानियर भन्छन्, ‘यदि तपाई“ उक्त विषयको विज्ञ हुनुहुन्छ भने तपाईंले पक्कै ‘यो विभिन्न पक्ष वा तत्वमाथि निर्भर रहन्छ। यो वास्तवमै जटिल छ।’
हामी सबैभित्र ‘सुझाव दानव’ भएको र सो दानवलाई नियन्त्रणमा लिन सबैभन्दा पहिला यो कति छिटो सक्रिय हुनथाल्छ सोप्रति ध्यान दिनुपर्ने स्टानियर सुझाउँछन्। ‘आफूले कत्ति छिट्टै सुझाव दिइसकेछु भनेर मानिस अक्सर अचम्मित हुने गर्छन्,’ उनी बताउँछन्।
हामीले जबरजस्ती थोपर्ने सुझावले सुझाव प्रापकको आत्मविश्वास र स्वतन्त्रतामा कसरी ठेस पुग्छ भनेर विचार गर्नु पनि यस दानवलाई लगाम लगाउने अर्को तरिका हो। यसले एकातिर प्रापकमा तनाव जन्माउन सक्छ भने अर्कोतिर कहिलेकाहीँ कुनै कार्यलाई सम्पन्न गर्न उत्कृष्ट सुझाव दिँदा पनि प्रापकले उक्त सुझावलाई उसप्रतिको आलोचनाको रुपमा लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ।
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियास्थित एक हार्डवेयर कम्पनीमा उपल्लो ओहदामा रहेर काम गर्दा त्यहाँ भर्ती भएकी एक नयाँ सहकर्मीको धेरै नै सुझाव दिने र अति नै हाबी हुनखोज्ने प्रवृत्तीको सामना गर्न सुजान (उनको थरलाई गोप्य राखिएको छ) लाई निकै हम्मेहम्मे पर्‌यो। ‘हरेक विषयवस्तुबारे उनलाई मत जाहेर गर्नुपथ्र्यो। अनि त्यो देख्दा मलाई लाग्थ्यो, ‘यहाँ आएको कत्ति पनि भएको छैन र पनि सबैले के गर्नहुने र के गर्ननहुने भनेर सिकाउनु पर्ने?’ उनी सम्झन्छिन्।
तर, दुर्भाग्यवश पछि गएर त्यहि नया“ सहकर्मी सुजानको प्रबन्धक बनिन् जसको कारण उनले निकै कठिन परिस्थिति भोग्नुप¥यो। हरेक पटकको बैठकमा मलाई सरसल्लाह दिन उनी मेरो छेवैमा हुने गर्थिन्। जसको कारण मलाई लाग्न थाल्यो कि मैले काम गर्नुभन्दा बढी कामबारे छलफल गरेर समय बिताइरहेकी छु,’ सो समयको मनोभाव खोल्दै सुजानले बताइन्।
अवस्था यतिसम्म कठिन बन्यो कि उनी पछि गएर केही निर्णय नै लिन नसक्ने बनिन् जुन जसबाट मुक्त हुनको लागि उनले कामबाट १७ महिनासम्मको लागि अलग रहनुपर्‌यो।
सुजानको घटनाले के बताउँछ भने सुझाव दिने मानिसले ठिक उल्टो सोँचेर सुझाव दिएता पनि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले भने अप्ठेरो अवस्था महशुस गरिरहेको हुनसक्छ। सो घटनामा सुजानले प्रबन्धकले उनको आत्मविश्वास गिराउन खोजेको र उनको शुक्ष्म व्यवस्थापनको प्रवृत्तिको कारण समग्र कम्पनीका कर्मचारीहरूको मनोबलमा क्षय आएको महशुस गरिन्।
आफूलाई उचित लागे पनि सल्लाह दिने बानी किन नराम्रो हो ?
सुझाव दिने बानी नियन्त्रण गर्न हामीलाई कठिन हुनसक्छ किनकी अरुलाई सल्लाह दि“दा हामीले आनन्दित महशुस गर्छौं अझ कसैले सल्लाह माग्दा त हाम्रो आनन्दको सीमा नै रह“दैन। तर, विभिन्न अध्ययनहरूले सल्लाह–सुझावले प्रापकभन्दा पनि प्रदायकलाई नै लाभ गर्ने देखाएको छ।
सन् २०१८ मा गरिएको एक अध्ययनले सुझाव दि“दा प्रापकहरूले भन्दा बढी प्रदायकहरूले आफूभित्रको हौसला वा आत्मविश्वासको कमीमाथि विजय पाउने देखाएको छ।
‘कसैले हामीस“ग सल्लाह माग्दा हाम्रो अहंमले सम्मानित महशुस गर्छ। हामीभित्रको ‘अरुमाझ बेग्लै स्थान बनाउने तथा हैसियत र शक्ति हासिल गर्ने’ चाहना परिपूर्ति भएको भान हुनेगर्छ,’ स्टानियर अथ्र्याउँछन्।
तर अब सबैसँग सबै प्रश्नको जवाफको अपेक्षा गर्न सकिन्न
आजकल प्रविधिले हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका र सोका लागि हामीलाई चाहिने सीपको स्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याइसकेको छ। यस परिपेक्षमा नेतृत्वकर्तास“ग सबै प्रश्नको जवाफ हुन्छ भनेर मान्नु गलत हुनसक्छ।
नेतृत्वकर्ताको रूपमा अब तपाई हरेक विषयको विज्ञ बन्न असम्भव छ। यस्तो प्रकृतिको आवश्यकता वा चाहनाले नेतृत्वकर्तामाथि दबाब एवं कठिनाइको मात्र श्रृजना गर्दछ,’ नेतृत्वकला विषयका प्राद्यापक जुलिया मिलनर भन्छिन्।
सुझाव दिने कार्यले नेतृत्वकर्तालाई थकित एवंं रित्तो बनाउने सान पोलार्डको अनुभव छ। करिब तीन वर्षदेखि अष्ट्रेलियाको बी मिडिया कम्पनीमा काम गर्न थालेयता उनले सबै ४५ जना सहकर्मीहरूलाई कुनै न कुनै विषय वा क्षेत्रमा सल्लाह–सुझाव दिइसकेका छन्।
तर यसक्रममा उनले आºनो सल्लाह दिने बानीले सल्लाह माग्ने व्यक्तिमा आºनो समस्या आफैंले समाधान गर्नेतर्फ उदाशिनताको विकास गराएको महशुस गरेका छन्। ‘अब म के चाहन्छु भने उनीहरू आफैं सक्षम बनुन् ताकी उनीहरूलाई ममाथि भर पर्न नपरोस्,’ उनी थप्छन्।
कोचिङ (प्रशिक्षण) पोलार्डको समस्याको प्रभावकारी समाधान भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सल्लाह माग्ने व्यक्तिलाई सल्लाह दिनुको सट्टा सहजीकरणमा आधारित प्रश्न गरेर उनीहरू स्वयंलाई आºनो लागि योजना बनाउन वा समाधान निकाल्न हौस्याउने कार्य गर्दा त्यसको प्रभाव दिर्घकालीन समयसम्म रहन्छ। ‘यस अन्तर्गत मानिसलाई सल्लाह दिनेभन्दा पनि हौसला दिने कार्य प्रधान बन्छ,’ मिलनर दाबी गर्छन्।